भागवत गीता भन्छ, यसकारण राम्रा मानिसहरुसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ - Internet Khabar
एजेन्सी । मानिसहरु प्राय भाग्यमा विश्वास गर्छन् । असल काम गर्ने मानिसहरु, असल सोंच र व्यवहारका मानिसहरु प्राय अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्छन् । जसले गर्दा सिधा रुख सबैभन्दा पहिले काटिन्छन् भन्ने भनाइ समेत छ । राम्रो कर्म गर्नेहरुलाई नै भाग्यले नराम्रो परिस्थिति सिर्जना हुने किन भन्ने प्रश्न गर्दै धेरैले भगवानको मूर्ती अगाडी बिलौना समेत गर्ने गर्छन् । राम्रा मानिसहरुसंग नै नराम्रो किन हुन्छ त ? यससंग सम्बन्धित एउटा कथा समेत छ ।
एकजना व्यापारी सधै मदिर जान्थ्यो र भगवानको प्रार्थना गर्थ्यो । ऊ भगवान श्रीकृष्णको सच्चा भक्त थियो । उसको व्यापार पनि राम्रो थियो । व्यापारी आफ्नो समाजमा पनि घुलमिल हुने, सबैलाई सहयोग गर्ने किसिमको थियो । त्यसैले सबैले उसलाई मन पराउँथे । त्यही समाजको एकजना खराब व्यवहार भएको व्यक्ति थियो । ऊ मन्दिरमा पनि चोर्नको लागि मात्र जान्थ्यो । जाँड रक्सी खाने, होहल्ला गर्ने र सबैलाई खराब व्यवहार गर्ने गर्दथ्यो ।
एकदिन त्यो जंड्याहा व्यक्ति मन्दिरमा गयो । मन्दिरमा पूजारी पनि थिएनन् , सुनसान थियो । त्यसपछि उसले त्यही मौका छोपी मन्दिरमा चढाएको भेटी र मुर्ती सबै उठायो । केही छिन पछि व्यापारी उक्त मन्दिरमा गयो । मन्दिरमा सबैथोक चोरी भएको थियो । व्यापारीले खाली मन्दिर देखेर निशब्द भइरहेको समयमा पूजारी आए । त्यसपछि पूजारी चिच्याए, ” व्यापारीले मन्दिरमा चोरी गर्यो” । वरपरका मानिसहरु जम्मा भएर उसलाई कुट्न थाले ।
मानिसहरुको कुटाइले ज्यान जोगाएर हिंडेको उसलाई बाटोमा गाडीले ठक्कर दियो । ऊ लड्यो । गाडीको मान्छे अत्तालिदा एउटा सुटकेस भुइँमा झरेको थियो, ऊ आफू पक्राउ परिने डरले सुटकेस पनि नउठाई गयो । अघिको चोरको हातमा त्यो सुटकेस पर्यो र खुशी हुँदै नाच्न थाल्यो ।
व्यापारी घर पुगेर आफूले पूजा गर्न राखेका मूर्ती बाहिर राख्यो र भगवान केवल भ्रम रहेछन् भन्दै रुन थाल्यो । रुँदा रुँदै ऊ सोफामै निदायो । सपनामा भगवान कृष्ण आएर भन्नुभयो, तिमी आज मर्ने योग थियो, तर तिम्रो कर्मका कारण बाँच्यौ । त्यो चोरको राजयोग थियो, तर उसको कर्मका कारण उसले केही पैसा मात्र पायो ।
धनतेरसको दिन यी १२ चीज किनेर १००० गुणा चम्काउनुहोस आफ्नो भाग्य
कतै झाडु त बनी रहेको छैन तपाईको गरीबीको कारण? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा